Fangoria Inounza Horror Screenplay 'Mushure mekuzvarwa' kuHupenyu - iHorror
musha Horror Varaidzo Nhau Fangoria Inounza Horror Screenplay 'Mushure mekuzvarwa' kuHupenyu
Fangoria Inounza Horror Screenplay 'Mushure mekuzvarwa' kuHupenyu
yakanyorwa na Sam Angelo September 12, 2018
Kuva nemubereki kunozivikanwa sekuoma, kunyanya kana iri yeiyo Frankenstein's monster vhezheni yemucheche. Handikwanise kufungidzira ndichiedza kubatanidza mwana wako kubva pakutanga (kunze kwekubata) iri basa riri nyore kana rakachena. Ichi ndicho chikonzero firimu nyowani yaFangoria Mushure mekuzvarwa ichave firimu yakakosha kuona kune vabereki vanogona kunge vakagadzira yavo yeFranken-mucheche, asi vanoda matipi uye manomano ekuti vangaramba sei vari vapenyu.
Iyo Screenplay, pakutanga naLaura Moss (Fry Day uye Kukwira Kumusoro: Iyo Nyaya yeZombie Kodzero yeMafambiro) naBrendan O'Brien (Vavakidzani uye Vavakidzani 2: Sorority Kukwira), Mushure mekuzvarwa inotungamirwa naMoss, iri kutsigirwa nemari neFangoria, inodaro Deadline. Pamwe naMoss, Mali Elfman (Ndisati Ndamuka) yakagadzirirwa kuburitsa mukuwedzera kune Dallas Sonnier (Bone Tomahawk uye Kukweva Kwese Konkrete) naAmanda Presmyk (Puppet Mudzidzisi: Littlest Reich uye Kukweva Kwese Konkrete) yeFangoria neCinestate. Fangoria ichave nebasa revagadziri vakuru vanopihwa kuna Phil Nobile Jr. (Kuuraya Mbiri uye Halloween: Iyo Yemukati Nyaya) uye Clay Neigher (Kutya kwaSatani (pre-kugadzirwa)). Chikwata chakapihwa chichava chinotungamira ichi chinobata amai-mwanasikana chinotyisa fest yegore uye yemhando yekurera vana
Dallas Sonnier Mufananidzo naIan Caldwell
Yakatsanangurwa ne Deadlinechinyorwa, Mushure mekuzvarwa ndeye nyanzvi yemochari inokwanisa kukwirisa chitunha chemucheche musikana; zvisinei, kunyangwe hosha diki iri mupenyu izvozvi, haigone kurarama nenzira dzechisikigo sevamwe vacheche vachangozvarwa. Kuti uchengetedze musikana mudiki ari mupenyu, wehunyanzvi akatendeuka musayendisiti akapenga anofanirwa kuunganidza zvakakosha zvehupenyu zvikamu kuti ape Frankenbaby. Nekudaro, izvo bio-zvidimbu zvinodiwa kuchengetedza musikana ari mupenyu zvinofanirwa kubva kune vakadzi vane nhumbu.
Mufananidzo naDavid Bukach Photography
Nehurombo kune yedu nyowani-zera Frankenstein, amai vemusikana vanoona kuti mwana amutswa kuupenyu nenzira dzisina hunhu. Nekutenda kune iyo Morgue tekinoroji, vaviri ava vanokwanisa kutungamira kuchisungo chinovimbisa kuti vachatanga rwendo rwehusiku husina kudzoka shure.
Mushure mekuzvarwa inovimbisa kuva gehena rerwendo runonakidza, inotora nguva yezvekare-nhoroondo yeFrankenstein iyo yakagadziriswa nguva dzisingaverengeke. Fangoria akazivisawo kuti vachange vachitsigira episodic horror comedy akateedzana naBarbara Crampton, iyo iwe yaunogona kuverenga chinyorwa chedu ichivhara icho pano!
Mushure mekuzvarwavachechevacheche vakafaFangoriaFrankensteinLaura Moss
Tekinoroji yekunyora padanho kubva kuOhio. Ini ndiri mukati: mafirimu, mitambo, kuverenga (kunyanya ma comics uye manga), zvinogumbura musikana, uye kunyora. Zvimwe zvinotyisa / zvinonakidza zvinosanganisira: Iyo Shining, Yakakwana Bhuruu, Paranoia Mumiriri, Alien (s), Mwanasikana weBlackcoat, uye The Texas Chainsaw Massacre (1974)
Derek Mears Rumored Kutamba Chisikwa Role mune Inouya 'Swamp Thing' Series
TIFF Ongororo: Jeremy Saulnier 'Bata Rima' iri Rakanaka Bleak
'Iyo Djinn' Kuuya Kumitambo, Vhidhiyo Pane Kudiwa ...
Bhurawuza Cateories Select Category Amazon (bhaisikopo) (7) Amazon (dzakateerana) (9) AppleTV + (1) Blu mahara (4) Comedy Horror (46) Comics (12) Facebook (akateedzana) (1) Ngano (31) Yakawanikwa Footage (26) Gore (23) HBO (mafirimu) (4) HBO (dzakateerana) (7) Horror Mabhuku (44) Horror Varaidzo Nhau (10,465) Anotyisa Mafirimu (175) Zvinotyisa Series (50) Zvinotyisa Subgenres (8) Hulu (akateedzana) (4) Bvunzurudzo (bhaisikopo) (32) Nhaurirano (dzakateerana) (2) LGBTQ Inotyisa (29) Lists (mafirimu) (37) Lists (akateedzana) (2) Pamusika (19) Monster Horror (9) Wongororo dzeMovie (41) Mafirimu (11) Mumhanzi (35) Netflix (bhaisikopo) (15) Netflix (akateedzana) (20) Kwete-Ngano (3) Zvakaenzana (75) Psychological Horror (zvinonakidza) (52) Series Ongororo (7) Kubvunda (bhaisikopo) (39) Kubvunda (dzakateerana) (15) Slasher (4) Shamisa uye Zvisingawanzo (35) Kutenderera Mafirimu (47) Kuratidzira Series (17) Zvidhori (2) Ngoro (firimu) (134) Ngoro (dzakateedzana) (31) Mhosva Yechokwadi (41) Vhidhiyo Mitambo (165) YouTube (bhaisikopo) (3) YouTube (akateedzana) (11)